10 Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina | Save A Train
musha > Chitima Kufamba China > 10 Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina
Nguva yekuverenga: 7 maminitsi(Last Updated On: 07/02/2021)
Nyika yengano, Dynasties, tsika, uye vanhu vachivaka mashiripiti eChina, imba ye 10 nzvimbo dzinotyisa dzekushanyira kuChina. Nzvimbo dzese dzinonakidza, kutaurira nyaya dzekare mune yega cobblestone, zambuko, nemvura yakachena ye 1000 munyanza.
Inotevera 10 nzvimbo dzinotyisa dzekushanyira kuChina, vave vafambi vanofadza kwezviuru zvemakore, saka gadzirira rwendo rwehupenyu hwese.
1. Epic Nzvimbo Yekushanyira MuChina: Zhangye Danxia Landform
Chiitiko chinoshamisa che geological, iyo Zhangye Danxia National Park mudunhu reGansu iri pamusoro pe 10 nzvimbo dzinotyisa dzekushanyira kuChina. mu 2009, "Gore dzvuku" danxia paki yenyika yakava nzvimbo yeUNESCO yenyika.
Iyo paki misanganiswa ye 50 sikweya makiromita, kuzorora pasi petsoka dzegomo reQilian. ichi kushamisika kwepanyama zvakatora zviuru zvemakore kuumba runako runokwezva vafambi vanobva kutenderera pasirese. Nzvimbo yaimbove gungwa, zvishoma nezvishoma yakashandura chimiro chayo kuita misoro uye nzira, kubva kuorenji kusvika kugirini, runako runofadza chose.
Ndoenda Sei KuDanxia Landform MuChina?
Unogona kubhururuka kuenda kuZhangye kubva kuLanzhou muawa, kana kutora iyo eco-shamwari nzira yechitima kufamba. Izvo chete 6 maawa nechitima.
2. Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina: Yuanyang Rice Materu
Kana iwe uri kutsvaga adventures, ipapo chiitiko cheedic chakamirira pasi 3,000 nhanho muYuanyang rice matare. Iwe uchawana aya anoshamisa matavi emupunga mudunhu reYunnan, mumakomo emakomo eAilao. Vanhu vanonakidza veHani vakagadzira ino yakanaka nzvimbo 2,500 makore apfuura.
'Muvezi ane hunyanzvi "akagadzira a UNESCO nhaka nyika saiti mumaoko avo asina maoko, padhuze neRed river pane zvinopfuura 113 sikweya makiromita. Mbudzi ndiyo imwe yenguva dzakanakisa yekushanyira yechipiri epic nzvimbo dzekushanyira kuChina.
Ndoenda Sei Ku Yuanyang Rice Terrace?
Chekutanga, unofanirwa kusvika Kunming town, uyezve nebhazi kuenda kuYuanyang. Chitima chebara kuenda kuJianshui ndiyo ichave nzira yakasununguka yekufamba, uye wozotora bhazi kuenda kuYuanyang.
3. Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina: Qinghai Lake
Dziva repamusoro soro muChina, Qinghai Lake ndiyo yechitatu nzvimbo inonyanya kushanya kuChina. Kana iwe ukafunga nezve kushanyira iri rinonakidza dziva, iwe unofanirwa kuziva iro Lake Koko Kana, iri kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweTibetan Plateau. saka, VaTibetan uye mamongi eTibetan vanoona sechitsvene.
Pamusoro peichi chokwadi, iyo inochinja mwaka mwaka, ita Qinghai nyanza inoshamisa uye senge hapana dzimwe nzvimbo muChina. Iwe unogona chaizvo kushanyira Lake Qinghai muzhizha, matsutso kana chirimo, uye uwane rakasiyana gungwa nguva dzese.
Ndoenda Sei KuLake Qinghai?
Chekutanga, tora chitima uende kuXining, uye ipapo unogona kutora bhazi kana kurenda mota kuQinghai nyanza.
4. Zhangjiajie – Precipitous Mbiru
Mbiru-dzakaita mafomati, iyo yekumusoro Zhangjiajie sango paki ndeyemhedziso inotyisa-inomutsa zvisikwa kushamisika muChina. Zhangjiajie ndeimwe-ye-ye-mhando saiti yematombo ejecha iwe yausingawani chero kupi pasi. Iyi epic nzvimbo yekushanyira kuChina ine zvinopfuura 200 nenhongonya, spires, nemakomo achingokwira achibva pasi.
Pamusoro pe, iwe uchave nerombo rakanaka kusangana nevanhu vashoma vashoma vanogara munzvimbo iri kure, uye zvipenyu zvine njodzi senge nondo yemvura yeChina uye Chinese hofori salamander.
Ndingaenda Sei KuZhangjiajie Maumbirwo?
Kana iwe uchifamba uchibva kuBeijing, Shanghai, kana Xian, wobva watora chitima kuenda kuZhangjiajie.
5. Jiuzhaigou – Akajeka Alpine Lakes
Mapopoma anoshamisa, munyanza, 9 Misha yeTibetan, uye kunyanya nzvimbo dzokuona dzakanaka, gadzira Jiuzhaigou mupata mumwe weiyo 10 epic nzvimbo dzekushanyira kuChina. Iwe uchawana Jiuzhaigou mumakomo eMin Shan, uye iri chaizvo a national Park.
Pakukwirira kwe 2,472 M. iwe unowana iyo Mashanu Ruva Gungwa. Izvo zvakakodzera zvachose rwendo nekuda kwemavara akasarudzika, mhedzisiro yedziva-pasi travertine dombo, and colorful algae. izvi 2 chokwadi chinogadzira Alpine nyanza mhedzisiro yemakomo uye bhuruu-turquoise mvura yakakomberedzwa nemhuka dzinokatyamadza.
Ndoenda Sei KuJiuzhaigou?
Iwe unozofanirwa kusvika kuChengdu, guta guru redunhu reSichuan kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweChina ne bhazi uye kutiza.
6. Dunhu reWestern Sichuan – Daocheng Yading Nzvimbo Yekuchengetedza
Kana iwe uri kuronga kupukunyuka kune iyo yakanaka hunhu hweChina, chando twi, makungwa akachena, nekufamba musango paradhiso, ipapo iyo Yading zvisikwa zvinochengeterwa zvakakunakira iwe. Iwe uchawana ino epic nzvimbo mudunhu reSichuan kuChina, uye zvirinani kuti uwane nguva yeinenge 2-3 mazuva, kuti vawane zvishamiso zvayo.
"Yekupedzisira Shangri-La" iri kumba kune vatatu Chianrezig, Jambeyang, uye Chanadorje makomo, iyo inoumba katuratifomu kuumbwa, uye kwaunowana iwo akanakisa maonero muDaocheng. Uyezve, zvirinani uve wakagadzirira iyo 1,000 munyanza, pakati pavo pane Erong "Mukaka" nyanza, uye inoshamisa mashanu Ruvara Danzhen nyanza pa 4,600 mamita.
Ndoenda Sei Ku Daocheng Yading?
Kana iwe uri mupfupi nenguva, wobva wabhururuka uchienda kuYading airport, uyezve tora bhazi yendege kuenda kuDaocheng. Iwe unogona zvakare kutora bhazi kuenda kuShangri-La, uye kubva ipapo tora bhazi rekuona kuenda kuYading. zvisinei, kana iwe uchinyatsoda kutsvaga ino epic nzvimbo muChina, wobva warara husiku muDaocheng.
7. Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina: Fenghuang, Dunhu reHunan
Fenghuang ndeimwe yemagariro nzvimbo pane edu 10 epic nzvimbo dzekushanyira muChina runyorwa. Iri guta rakachengetedzwa zvakanaka rakavakwa mu Qing imba uye yakachengetedza mamiriro ayo ekare nemaonero pamusoro 300 makore.
saka, paunopinda muguta rino rinofadza, iwe unonzwa iwe uri kunyatso kufamba kudzoka munguva. Dzimba dzematanda dzemuguta, mabhiriji, matembere haana kubatika nenguva uye anogadzira inoshamisa mhepo masikati kana husiku.
Zvinoenderana nenyaya, iro guta rakatumidzwa zita raro "Phoenix" apo 2 Phoenix yaisada kubva nekuti yaive yakanaka kwazvo, saka vakasara vachizvitarisira.
Nzira Yekusvika KwaFenghuang?
Kune mabhazi chete kuFenghuang, hapana zvitima. Unogona kutora bhazi kubva kumaguta ari pedyo muHunan, saChangsha, uye Zhangjiajie.
8. Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina: Iyo Huru Rusvingo rweChina
Iyo Great Wall yeChina ndechimwe chezvishamiso zvepasi, saka zviri pachena inoratidza yedu 10 nzvimbo dzinotyisa dzekushanyira kuChina.
Zvekare 2,300 makore iyo Great Wall yeChina inotonga nzvimbo yekuchamhembe kweChina, uye ndicho chiitiko cherwendo rwese kuChina. Zvinosuruvarisa, pamusoro pemakore nekuda kwekukukurwa kwepanyama uye kukuvara kwevanhu - 2,000 makiromita apera kubva kune ino yakatanhamara chiratidzo.
Iwe unofanirwa kucherechedza kuti kana iwe uri kurota uchifamba uchidzika nemadziro ese, zvinotora iwe 18 mwedzi zvirinani kuti apedze iyo Great Wall yeChina kufamba.
Ndoenda Sei Kusvika Kumadziro Akakura EChina?
Unogona kutora chitima kubva kuBeijing kuenda kuBadaling chiteshi chechitima, uyezve tora yemahara shuttle bhazi kuenda kuBadaling Great Wall tikiti hofisi.
9. Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina: Qiandao Lake
Uine zvinopfuura 1000 zvitsuwa, Qiandao nyanza ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa kwazvo pasirese, ndoda China. Iwe uchawana iri rakanakisa dziva muChunan nyika, Zhejiang dunhu, kuvhara nzvimbo ye 580 sikweya makiromita.
Gungwa chiwi cheziwi rakagadzirwa nevanhu uye rakagadzirwa mushure mekugadzirwa kwedamu mu 1959. Kana iwe uine rombo rakaringana kuenda kuQiandao nyanza muChina, iwe uchave uine epic nguva yekutsvaga ayo mazhinji madziva uye musango paki.
Maitiro Ekuenda KuQiandao Lake?
10. Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina: Lijiang Guta Rekare
Lijiang ndiro rechipiri guta rekare pane yedu 10 epic nzvimbo dzekushanyira muChina runyorwa, uye imwe ye 4 maguta ekare akachengetedzwa zvakanaka muChina. Tembere dzaLijiang, yakasarudzika Naxi kuvakwa kwekare dzimba-dzakapfirirwa dzimba dziine chivanze chakakomberedzwa, zvirinani kuona.
Sezvo iwe uchifamba kuburikidza neLijiang's cobbled migwagwa, mwenje tsvuku pamusoro, uye uwane iyo 354 mabhiriji, iwe uchashamisika uye kunakidzwa netsika yevanhu veNaxi, uye mapurani.
Ndoenda Sei KuFenghuang Kutaundi Rekare?
Nzira yakanakisa yekusvika kuLijiang guta rekare iri nekutora iyo Chitima cheChinese kuenda kuchiteshi chechitima cheLijiang, ipapo nebhazi kana mota.
pano pa Save A Train, tichafara kukubatsira kuronga rwendo rwako kune idzi 10 zvikuru paakaita nzvimbo kushanyira China nechitima.
Do iwe unoda kusimbisa yedu blog positi "10 Akawanda Epic Nzvimbo dzekushanyira MuChina”Pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fepic-places-visit-china%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)